Android ve no ho robot kely handresy ny adintsika? | Avy amin'ny Linux
Android ve no ho robot kely handresy ny adintsika?
Charlie-Brown | | GNU / Linux, About us
Tamin'ny fiandohan'ny volana lasa a lahatsoratra en Techcrunch, fanazavana voatanisa avy amin'ny orinasa mpandinika malaza IDC, mampiseho ireo tarehimarika amin'ny varotra fitaovana finday amin'ny faran'ny telovolana faha-3 taona 2012, araka ny rafitra miasa, ny fampahalalana izay nibodo ny toerana tao ny hafa toerana maro. Mety misy efa mahalala azy, na izany aza asehoko anao ireo tarehimarika voalaza etsy ambany:
Mahagaga, marina? Eny, mbola vao mainka aza raha milaza aminao aho fa 5 taona monja taorian'ny nanambarany tamin'ny fomba ofisialy, Android dia nahavita nivarotra tao anatin'ny 3 volana lasa ny isan'ireo fitaovana mitovy amin'ny totalin'ny namidy tamin'ny 2007, ankehitriny, tsia Io indrindra no tiako hizara, raha tsy izay no tena zava-dehibe, raha ny fihevitro azy, momba an'io toe-javatra io sy ny fironana hita miharihary.
Tsy tsiambaratelo ho an'iza na iza fa finday ny informatika ankehitriny, izany hoe, amin'ny ankapobeny, ny fitaovana finday (finday avo lenta sy takelaka) dia be mpampiasa, samy manao asa isan'andro (mamaky sy mamaly mailaka, mizaha tranonkala, sns. ), ary koa ny fampandehanana ny rindranasa raharaham-barotra (famoahana ny fangatahana sy ny tatitra momba ny varotra, sns.), amin'izany dia tsy maintsy ampianay fa ny fitomboana lehibe indrindra amin'ny mpampiasa teknolojia IT sy ny tambajotra dia voasoratra ao amin'ireo firenena lazaina fa mipoitra (India, Afrika, Azia atsimo atsinanana, sns.), Izay ahitan'ny ankamaroan'ny mpampiasa vaovao azy ireo amin'ny alalàn'ny iray amin'ireo fitaovana finday ireo, fironana iray izay toa hamafisina amin'ny ho avy sy izay lanjan'izy ireo fampanantenana lehibe.
Eny ary, inona no fiantraikan'izany, raha ny hevitro, misy an'io toe-javatra io? Eny, hitranga amin'ny ho avy izany amin'ny Android mitovy amin'ny Windows amin'ny fotoana fisian'ny PC sy ny fampahalalana olona azy. Mijanona kely Ndao isika hieritreritra, fa maninona i Windows no mbola mitana ny quota avo lenta ho an'ny mpampiasa? Tsotra, satria io no fantatr'izy ireo, ary miverina amin'ny loop tsy manam-petra izay "tonga fenitra" amin'ny solosaina isika ary izany no antony ampiasain'izy ireo sy ny mifamadika amin'izany. Fa ankehitriny ny ankamaroan'ny mpampiasa vaovao dia tsy mifankahalala amin'ny Windows na vokatra Microsoft hafa amin'ny "batisan'izy ireo" fa amin'ny Android, ankoatry ny ampahany tsara amin'ny mpampiasa "taloha" dia mahazo fitaovana Android ihany koa.
Ary hiteny izy ireo hoe: "Eny, ka inona?" Eny, tsy misy, tena tsotra, mba hanombohan'izy ireo mampiasa karazana fitaovana hafa (kahie, PC, sns.) Mifototra amin'ny sehatra iray izay mizara ny fotony afovoany mitovy, toa ny Ny distro GNU / Linux dia tokony ho tsotra dia tsotra, satria ny tontolon'ny mpampiasa sary dia mitovy, maro amin'ireo rindranasa no azo entina anelanelan'ny fitaovana, sns., Izay tsy maintsy ampiana fa ny famindrana ny fampahalalana ao anatin'ny ekosistema iray. fitaovana misy rafitra fiasan'ity karazana ity dia malemy sy tsotra ampiharina.
Azo heverina fa ny zava-bita tamin'ny ezaka "evanjelisitra" nataon'ny vondron'ireo mpampiasa ny teknolojia open source, dia hihoatra lavitra noho izay azon'ny robot kely mipetraka eto, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Android ve no ho robot kely handresy ny adintsika?
Android dia tsy isalasalana fa fahombiazana. Fa ny Android dia Linux ihany, ny ampahany GNU dia ilaozana. Na izany na tsy izany dia aleoko in'arivony imbetsaka amin'ny iOS sy Windows Phone.
Mahaliana ny mametraka an'i Linux ho zavatra misaraka tanteraka, toa ny OS an'ny "vitsy an'isa" hehe. Tsy azoko ny antony mahatonga an'io, tokony hapetrak'izy ireo kokoa ny Linux (Android) sy Linux (Hafa). Fa eny, handresy amin'ny ady tokoa ny Android.
Tahaka ny namoronana ilay teny hoe "GNU / Linux" dia tokony hampiasaina ny teny hoe "Android / Linux".
Obux dia hoy izy:
Heveriko fa tokony ho toy izao, ny android dia manamarika ny aloha ary aorian'ny heveriko fa mampiasa Linux ho toy ny fototra.
Mamaly an'i Obux
Ho an'ny android -ko dia maneho ny filozofia an'ny google izy fa tsy ny an'ny linux.
Ny rindranasa Android dia tsy maintsy atao mifanaraka tanteraka amin'ny GNU / Linux. Any isika dia handresy indroa amin'ny ady. Novakiako fa ny tena sakana dia ny rafitry ny varavarankely X. Angamba miaraka amin'ny fifanarahana Wayland dia mora tanterahina, tsy fantatro.
Toa ahy fa ny sakana lehibe dia ny mihidy sy ny fitaovana tsy manara-penitra ... Eny, ho an'ireo mpanamboatra finday avo lenta ny orinasa dia ny hivarotra singa betsaka kokoa, raha toa ka mora tokoa ny manampy fampandehanana vaovao amin'ny alàlan'ny rindrambaiko PC-style, dia tsy ho betsaka ireo hivoaka hahazoana smartphone vaovao isaky ny maodely vaovao natomboka eny an-tsena, toy ny mitranga amin'ny Apple iPhones izay voafetra amin'ny fomba mahatsikaiky na amin'ny rindrambaiko na amin'ny fitaovana, mba hananana vaovao avy eo amin'ny fandefasana ireto maodely manaraka ireto.
Fa tsy misy ifandraisany amin'izay nolazaiko izany. Tsy mila mahafantatra ny fitaovana ilaina hahazoana ny rindranasa Android hihazakazaka amin'ny GNU / Linux. Heveriko fa noho izay lazaiko dia misokatra malalaka ary misy ny zavatra ilaina.
Oh! Nandika vilana ny zavatra nolazainao aho ... Nihevitra aho fa ny fampandehanana fampiharana Android amin'ny finday miaraka amin'ny GNU / Linux no rafitra fiasa.
iván Barra dia hoy izy:
Izaho dia mpampiasa android nandritra ny roa taona lasa izay, hatramin'ny "Donut", avy amin'i Symbian izy; ho ahy manokana dia manompo ahy be dia be izy, ary nanaraka ny fivoarany tamim-pahalianana foana aho, saingy, na eo aza ny zava-drehetra, raha toa ka Java ny motera misy azy, voasakana ny fivoarany, tokony hanova ny moteranao indray mandeha ianao ho an'ny zavatra mangatsiaka kokoa sy mavesatra kokoa, izay azontsika atao ny mahita ny rindranasa manidina miaraka amin'ny fitaovana misy ankehitriny, izay ahitako fa manana core 4 dia tsy maninona izany. Tsy misy java virtoaly intsony amin'ny android, eny amin'ny motera vaovao
Mamaly an'i iIván Barra
Somary mifandraika ihany izany, raha toa ka mitondra fitaovana maoderina miasa toy ny milina virtoaly Java (izany hoe ny milina virtoaly Java dia tsy rindrambaiko fotsiny, fa misy sombin-fitaovana manokana momba an'io) dia hovonoina ireo rindranasa Java. "Natively", ary ny fialan-tsiny fa miadana kokoa i Java ary tsara kokoa ny fiteny hafa dia tsy mitombina intsony, ary inona no fantatro, io fanehoan-kevitra io dia nolazain'ny profesora iray tao amin'ny oniversite, elektronika, izay, noho ny tsy fahalalako adala , tsy ho tonga tato amiko mihitsy izany haha
Na tiana na tsia, toy izany bebe kokoa na latsaka, marina tanteraka ianao eto amin'izao tontolo izao. Angamba ity "ady" ity izay niezaka nanakorontana ny ampahan'ny fampiasana Windows an'ny Linux dia avy amin'ny tanan'ny goavambe hafa toa an'i Google. Matetika mitranga fa olona maro no tsy miraikitra amin'ny zavatra misy fa manandrana mamakafaka sy mandroso amin'io làlana io ary miaraka amin'ny Linux sy Linux dia misy zavatra betsaka azo zahana ary ny maintso sy maitso kely dia mety hanome antsika ny fanerena farany. Fiarahabana.
Ny andro anaovana varotra fitaovana finday, ahafahako mametraka an'i Debian tsy misy olana, na rafitra miasa hafa maimaimpoana, ary miaraka amin'izay dia afaka mampiasa ny herin'ny fitaovana sy ny rindrambaiko avy amin'ny birao KDE aho (na izay tiako tadiavina …). Amin'io andro io dia handinika ny fividianana iray amin'ireo smartphone aho.
Heveriko fa amin'izao fotoana izao ny herin'ny finday avo lenta dia ampy (processeur tsara, sary tsara - samy amin'ny famahana ny efijery sy amin'ny 2d sy ny 3d acceleration-, ary ny fifandraisana tsara), hampandehanana distro GNU / Linux (na rafitra miasa mahazatra hafa birao). Saingy amin'izao fotoana izao amin'ity karazana fitaovana ity dia tsy mahita fenitra toy ny ao amin'ny PC ianao izay manamora ny fametrahana distro ary miasa avokoa ny zava-drehetra toy ny amin'ny PC birao, ankoatry ny fantsom-pitaovana maro mihidy fa tsy manana mpamily maimaimpoana ...
Ny marina dia ny Android dia azo antoka fa nahatratra fizarana tsena marobe ary zavatra misy izany. Na izany aza, aza afangaro. Mampiasa Android ny olona amin'izay asongadin'ny mpanoratra, ary izany no antony nanombohany nampiasa Windows. Io no tonga ao amin'ny fitaovan'izy ireo ary tsy mieritreritra ny hanova azy izy ireo. Tsy hitako marina fa afaka mandray soa amin'ny fampiasana ny GNU / Linux amin'ny PC desktop i Android. Mampiasa tsotra ny zavatra ampiasain'ny olona ny olona satria io no avo lenta amin'ny gadget.
Mazava ho azy fa ho antsika Android dia linux, tsy misy isalasalana, fa ny ankamaroan'ny olona mampiasa PC, takelaka, na telefaona finday dia tsy mahalala akory ny atao hoe Rafitra Miasa, satria tsy liana mivantana hahalala izany izy ireo.
Hevitra manetriketrika ahy izany, fa ny Android no avo lenta amin'ny telefaona sy takelaka maro, ary tsy liana ny olona fa misy rindrambaiko maimaimpoana ao ambadik'izany na misy "Android" ho an'ny PC-ny. Tsy hitako ny synergy misy eo amin'ireo rafitra miasa roa. fotsiny
Android dia mpifaninana iray hafa amin'ny GNU / Linux. Ekosistema manokana (na dia rafitra loharano misokatra aza), miaraka amin'ny SDK azy manokana, ny GUI azy manokana, ny APKs-ny, ... Raha lasa mifanaraka amin'ny GNU / Linux izy indray andro dia mpiara-miombon'antoka tena tsara (lalao / fampiharana mifanentana amin'ny lafiny roa) . Amin'izao fotoana izao ny zavatra tsara fotsiny dia ny rafitra kernel Linux mikasika ny oron'ny Microsoft sy Apple (ireo emperora loharano mihidy).
Miguel: «Ho an'ny android -ko dia maneho ny filozofia amin'ny google fa tsy ny an'ny linux».
Tsy matoky na inona na inona avy amin'ny Google amiko aho, manana tombontsoa miafina foana izy ireo. Ratsy noho ny Microsoft sy Apple izy ireo izay atrehin'izy ireo farafaharatsiny.
Mazava ho azy fa mandresy be dia be ny Android. Ankehitriny, raha ny marina dia misy zavatra roa tokony hodinihina.
1. Azo idirana kokoa ny Android (ary raha azo aleha, tsy voatery hoe "mora" kokoa).
2. Android dia manana orinasa maro hafa mamolavola sy manamboatra fitaovana mampiasa Android noho ny OS finday hafa.
Midika izany fa na dia mety manana 10 aza ny Android (mety ho mihoatra ny vitsy izy ireo, ohatra fotsiny) ireo orinasa manararaotra an'io OS io mba hanamboarana fitaovana sy hivarotra ny vokatra vokariny, Apple, Microsoft ary ny hafa dia manana "allies" vitsy kokoa amin'izany faritra. Noho io antony io dia hitako fa tsy rariny loatra raha ampitahaina amin'ny "iza no nivarotra bebe kokoa" na "firy ny mpampiasa manana Android mifanohitra amin'ny rafitra hafa" ireo fitaovana ireo, satria na dia manana ireo orinasa folo mampiasa Android mivarotra ny fitaovany aza izahay, angamba roa na telo izay mahatonga ny iOS, Windows na olon-kafa. Mazava ho azy fa raha manana vokatra aho ary tsy matoky afa-tsy ny mpanamboatra iray hanao izany ary, angamba, misy olon-kafa manana vokatra mitovy nefa manana mpanamboatra maro hafa hanampy azy ireo, ireo mpanamboatra ireo dia homena andraikitra hanao zavatra izay tena mpifaninana ho ahy na ho an'ireo sisa mamorona vokatra mitovy amin'izany ary hanana tombony lehibe. Zavatra mitovy amin'ny nataon'i Canonical tamin'ny OS-ny. Canonical dia orinasa lehibe iray, manana mpiaramiasa amin'ny faritra samihafa izy ireo, ary na dia ho an'ny sasany aza misy OS tsara kokoa noho ny Ubuntu, dia manohy miavaka izy ireo satria, amin'ny fomba tsotra sy tsotra, manana loharano maro kokoa noho ny OS hafa izay mety manana potika tsara koa izy ireo; Na dia any amin'ny faritra sasany dia tsara lavitra noho ny Ubuntu izy ireo, Ubuntu dia manana tombony lehibe amin'ny sehatry ny varotra.
Mazava ho azy, manohana ny rafitra maimaimpoana aho saingy tsy mieritreritra aho hoe nanao na nanohy nanao asa tsara tamin'ny rafitr'izy ireo i Google raha ny fahalalahana no resahina. Izaho manokana dia aleoko ny iOS, na dia efa nividy ilay Galaxy Nexus vaovao aza aho tamin'ity herinandro lasa ity.
Manantena aho fa manohy manjakazaka amin'ny tsenan'ny smartphone i Android, manana Samsung Galaxy manokana aho ary tena tsara ny marina, mihoatra ny iOS aho ary betsaka lavitra noho ny telefaona Windows. Tsy maninona na avy amin'ny Google, Linux XD no ao am-pony
Ny marina dia rehefa afaka mametraka an'i Debian amin'ny telefaona iray aho, amin'izany andro izany dia ho faly aho 😀
heero_yuy91 dia hoy izy:
Vaovao tsara 🙂 Heveriko fa misy distro afaka manamboatra lalana ho an'ireo rahalahiny hafa eo amin'ny tontolon'ny smartphone ary antsoina hoe Ubuntu izy io. Raha mahavita manokatra habaka amin'ny android ny distro azo antoka fa betsaka ny hanao azy io later
Mahita somary sarotra aho fa ny distros toa an'i Debian, Arch Linux na Fedora dia afaka mahatratra izany ao anatin'ny fotoana fohy, saingy matoky aho fa indray andro any dia ho tanteraka io ... Amin'izao fotoana izao no hany tokana afaka manao azy dia ny Ubuntu, ny tetikasa dia efa an-dàlana ary efa nanomboka Mba hanomezana valiny dia azo atao izao ny mametraka Ubuntu amin'ny Nexsus sy amin'ny fitaovana finday sasany koa, Eto aho mizara rohy misy fampahalalana momba ilay tetikasa, azonao atao ny mikaroka fampahalalana bebe kokoa amin'ny Internet.
Raha nandresy ny ady ho antsika i Android !!! ary ny ubuntu (na dia maro no mankahala azy, tiako manokana izany) dia ho ampahany lehibe amin'ity fandrosoana manan-danja ity 😉 ary ho tsarovana mandrakizay sy mandrakizay toy ny distro voalohany nandresen'i android. Amena…!
Valio i heero_yuy91
Eny, ny Ubuntu amin'ny maha distro azy dia manana olana maro, mpankafy maro ary mpanaratsy maro, na izany aza dia nahatratra ny fotoana fohy "Canonical" izay tsy mbola tratran'ny distros hafa tamin'ny be lavitra.
Raha ny marina dia eto no manazava ny momba an'ity Ubuntu + Android ity »-» https://blog.desdelinux.net/ubuntu-android-de-que-va-esto/
Tonga eo amin'ny tontolon'ny Linux aho, ary ny marina, ireo sehatra roa mifaninana roa hafa (iOS sy WinPhone 8), zara raha afaka nanandramana azy ireo aho. angamba satria nifototra tamin'ny Linux, dia nahita ny Android ho fotoana tsara indrindra foana aho, ary niandry ny fandreseny tamin'ireo sehatra hafa aho. fa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy naha mpampiasa ahy dia afa-po kely aho. Heveriko fa ny tena manelingelina ahy indrindra dia ny fanavaozana ny rafitra, ary noho izany dia asehoko ohatra iray: ny Xperia dia natomboka tamin'ity taona ity, ary iray volana lasa izay, nanambara i Sony fa tsy hahazo Jelly Bean, na dia mitovy aza ny fitaovana entiny. ny hafa izay handray azy. Na dia marina aza fa misy ny rôma, tsy hitako fa rariny raha mila milamina amin'izany aho. raha mizaha ny arabe aho dia hitako fa handray na hahazo iOS 3 ny iPhone 5GS, fitaovana iray navoaka tamin'ny 2009 dia mbola manan-kery ary tohanana mandritra ny telo taona, na dia tsy ampitahaina amin'ireo mpandimby azy amin'ny lafiny teknika aza. Etsy ankilany, ny ahy, novidiana vao haingana, dia efa nafindra toerana. Tena nitsikera mafy an'i Apple aho tamin'ny lafiny sasany ary eto dia fantatr'izy ireo izany, saingy mazava amiko fa tsy tena liana amin'ny mpampiasa i Google. Tsy milaza aho fa tsy mihetsika amin'ny fomba mitovy i Apple, fa ny tena kely indrindra dia tsy mangarahara, ny farany dia mazava kokoa amin'ny resaka fikasana, na dia ratsy aza izy ireo.
Nefa tsy heveriko fa Google no mametra ny fanavaozana, izy no mpanamboatra. Mazava ho azy fa manao ny fitaovan'izy ireo izy ireo mba tsy hifanaraka amin'ireo fanavaozana ho avy mba hitazomana anao hividy vokatra vaovao. Mifanohitra amin'izany, ny Galaxy Nexus (telefaona Google) dia tsy voafetra amin'izany. Raha OS na fanavaozana no mivoaka vaovao dia azonao atao izany fitaovana izany. Isaky ny nieritreritra ny hifindra amin'ny Android aho dia nataoko tamin'ny fijeriko ireo ekipa Google noho io antony io.
marina ny lazainao, fa marina koa fa tsy miraharaha firy ny sombintsombiny i Google. Ny porofo dia tamin'ny fanambarana vao haingana nataon'ny iray amin'ireo ekipa Android nangataka tamin'ny mpanamboatra hanova bebe kokoa ny Android amin'ny sehatra misy azy avy. Raha ny momba ny fitaovana Nexus dia marina ihany koa fa izy ireo ihany no fomba ahafahana manaraka ny Android. ary eny, raharaham-barotra izany. Raha nanohana ny fitaovana rehetra izy ireo dia maro ny mpampiasa no tsy mividy vokatra vaovao, saingy somary mandiso fanantenana ihany. Volana vitsivitsy lasa izay dia tsy nahoako izany, satria nanana Nokia 5800 miaraka amina sehatra maty aho, nefa izao dia eo amin'ny Android aho dia miandry kely kokoa.
Izaho dia manana moto tsy manara-dalàna najanon'ny Motorola izay mbola miendrika endrika mifototra amin'ny romotra masaka, saingy io no izy, te hivarotra bebe kokoa ny indostria.
Azafady mba valiako amin'ny fomba voafintina ny fanehoan-kevitra fa tsy ny tsirairay, araka ny tokony ho izy, fa ny olana amin'ny fifandraisako dia manery ahy amin'izany, fa tsy noho izany antony izany dia mitsahatra tsy mijery ny tsirairay aminareo aho. Ankehitriny, inona no mampanahy antsika.
@Blaire Pascal: Tsy dia azoko tsara koa ny fanasokajiana, nitady fampahalalana bebe kokoa aho saingy tsy nahita na inona na inona izay manazava ny fototr'izy ireo mba hanavahana azy ireo.
@adrian: Marina ny anao fa nakatona ny fitaovana ary tsy namboarina, ny voalohany dia sarotra be, heveriko fa ny fisian'ny open-hardware dia azo atao amin'ny fomba mitovy amin'ny rindrambaiko misokatra, farafaharatsiny amin'ny fe-potoana fohy na salantsalany Raha ny momba ny tsy fanarahana marimaritra iraisana azy, hitako ho tombony bebe kokoa izany satria jereo ny habetsaky ny sehatrasa fikirakirana samihafa mampiasa Android, izay mandray anjara amin'ny fanaparitahana azy; Mampiseho azy ireo ny tarehimarika.
@Raul: Miombon-kevitra aminao aho.
@ ilván Barra: Heveriko fa tsy miova, mandra-pandroaka an'i Java, ny tombony feno amin'ity sehatra ity dia tsy hararaotina.
@adrian: Raha mikaroka ao amin'ny Google ny "ubuntu + install + tablet" ianao dia ho hitanao fa azo atao ny mametraka distro hafa amin'ny takelaka, dia toy izany koa no tadiavinao raha mitady "ubuntu + install + smartphone" ianao; Ankehitriny, fa azo atao dia tsy midika hoe mora sy tsotra araka izay tadiavintsika izy, okay; Tsy azo atao amin'ny fitaovana rehetra izany raha tsy amin'ny maodely sasany ihany, azo atao ihany koa izany, fa tsy maintsy manomboka amin'ny zavatra iray ianao, raha tadidinao fa nanomboka toy izany koa ny GNU / Linux, vitsy ny mpamily ary noho izany dia vitsy ny solosaina nihazakazahany sy jereo ny toe-javatra ankehitriny.
@Tesla: Io indrindra no hevi-dehibe ao amin'ilay lahatsoratra; Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mahita azy mangarahara raha Android na Windows na OS hafa tonga amin'ny fitaovany, ary tsy hanahy ny hahita izy ireo ary izany indrindra ny antsipirihany afaka manampy, satria raha mametraka kahie na PC miaraka amina interface izay "mahazatra" dia hampiasa azy ireo izy ireo, tsy manontany tena raha Windows izy na tsia, miasa ho azy ireo fotsiny izany, fotoana.
@ Windóusico: Raha izaho manokana dia tsy azoko hoe maninona ianao no milaza fa "manokana" io, fa farafaharatsiny mifanaraka izahay amin'ny famaranana ny hevitrao: "... fa misy rafitra kernel Linux mikasika ny oron'ny Microsoft sy Apple ..."
@platonov: Manantena aho fa tsy hampiasa serivisy Google, na dia ny motera fikarohana azy ireo aza.
@Darko: Marina ny lazainao momba ny Canonical, izay ampiako azy hoe iza no manana ny toerana tsara indrindra hahazoana fifanarahana amin'ireo mpanamboatra fitaovana mba hivoahan'ny ekipany miaraka amin'ny distro GNU / Linux. Mikasika izay avoakanao momba an'i Google dia tsy miombon-kevitra aminao aho, farafaharatsiny mba tsy nanehoany izany.
@Adoniz (@ NinjaUrbano1): Raha miditra ianao http://www.htcmania.com ho hitanao fa raha azo atao amina ekipa sasany dia angamba tsara vintana ianao ary anisan'ireny ny anao, lasa adala manandrana dia lazao anay rehetra.
@ heero_yuy91: miombon-kevitra amin'ny hevitrao aho, azoko antoka fa hahita ny distro tohana bebe kokoa isika amin'ny ho avy.
@elendilnarsil: Miombon-kevitra amin'ny valintenin'ny mpiara-miasa Darko amin'ny hevitrao aho, tsy ny Android (na Google) no olana, ny mpanamboatra ny terminal no mametra ny fanavaozana. Mikasika ny fampiroboroboana ny Google dia manova ny Android araka ny filan'izy ireo ny mpanamboatra, mihevitra aho fa, tsy manimba, dia tsara izany satria manolotra safidy sy làlana fampandrosoana bebe kokoa ny fahasamihafana.
@vinsukarma: Araka ny voalazanao; "Misy ve izay", farafaharatsiny eto dia manana safidy bebe kokoa isika noho ny fotoana sy ny talenta izay natokana ho an'ny olona "mahandro" ROM ary avy eo dia natolony ho an'ny rehetra, izany no iray amin'ireo tombony azo amin'ny rafitra iray misy ny GNU / Linux ao amin'ny ny ADNanao.
Ary indray, misaotra anao rehetra tamin'ny fanehoan-kevitra sy ny fijanonana nijanona.
Manokana izy satria nanangana bara fitodiana ho azy manokana i Google. GNU / Linux sy Android dia tontolo roa misaraka. Tsy nametraka fifandraisana misy karazana OSX / iOS izy ireo, tsy manome toky momba ny fampiasana Linux amin'ny PC ary manalavitra ny teny Linux rehefa milazalaza momba ny Android. Mamono ireo rafitra hafa miorina amin'ny Linux i Android, aleoko zavatra toa an'i Maemo hahomby in'arivony (fa miaraka amin'ny Qt sy Plasma Active :-P) be dia be.
Ny olana amin'ireo mpanamboatra manova ny android araka izay itiavany azy dia ny famelany ireo fitaovana tsy ho ela, satria tsy ny mpanamboatra rehetra no manavao ny fitaovany, toa ahy. Amin'ny farany, araka ny efa nolazain'izy ireo teto, amin'ny Nexus ihany no ahafahanao manavao elaela.
Ho an'ny Android nataoko dia nanova ny fiainako io, nanakaiky ny Linux aho, hitako foana ho toy ny hafahafa. Ankehitriny manana Android 3 aho (filalaovana Xperia, coolpix Nikon ary takelaka), ary mampiasa azy ireo bebe kokoa noho ny PC Windows aho.
Heveriko fa Google no ao ambadik'izany manome ny fahatokisan'ny mpampiasa.
Ny lesoka ao amin'ny Windows 8 dia mamela ny OS
Sary haingon-trano 23 tsara ho an'i Fedora